Dhawr qof oo aanu jeclaan lahayn inaad la kulanto - Cunnooyinka Taayirada
Dad yar oo aan jeclaan lahayn inaad la kulanto
Ma ogeyd in sanad gudihiis, ay ubaahantahay awood in kabadan 12,000 oo qof oo daryeel si loo hubiyo in Cuntooyinka Lugaha la geeyo maalin walba? Iyadoo aan loo huraynin iyo deeqsinimada tabaruceyaasheenna, ma jirto si fudud oo ay Cunnooyinka Lugaha u jiri karaan oo adeeg u keenaya nafaqada iyo madax-bannaanida waayeelka maxalliga ah iyo dadka naafada ah.
Hadday cunno keenayso ama ay daaha gadaashiisa ka caawineyso howlaha yar yar ee loo baahan yahay si aan faa'iido doon ahayn u socodsiinno si habsami leh, mutadawiciinteennu waa kuwo aad u qiimo badan. Sababtoo ah bisha Abriil waa Bisha Is-xilqaannada Qaranka, waxaan jeclaan lahayn inaad la kulanto in yar oo ka mid ah dadka waawayn ee sameeya Meals on Wheels world wareega.
Mellisa waxay tabarucaad usameysaa todobaadle ah xafiiska Metro Meals on Wheels si ay uga caawiso maaraynta xogta iyo baahiyaha kale ee maamulka. Waxay sidoo kale ka shaqeysaa barnaamijka dugsiga kadib ee Dugsiga Hoose ee Bel Air ee ku yaal New Brighton halkaas oo ay ka caawisay ardaydeeda inay u sameeyaan meeleyn loogu talagalay dadka cuntada hela! Waad ku mahadsan tahay wax kasta oo aad sameyso, Mellisa!
Phil wuxuu tabaruce u ahaa Cunnooyinka Cagafyada in ka badan 7 sano wuxuuna ka caawiyay Cunnooyinka Cidhibtirka, Blizzard Box Blitz (halkan ku sawiran) iyo cunno bixin joogto ah marka lagu daro riwaayaddiisa caadiga ah ee toddobaadlaha ah ee metals on the Wheels xafiiska. “Weligeyba waxaan ahaa cunto-yaqaan,” ayuu yidhi Phil, sidaa darteed waxay isaga siinaysaa qanacsanaan weyn inuu ku tabaruco waqtigiisa si uu gacan uga geysto hubinta in nafaqo nafaqo leh la gaarsiiyo waayeelka iyo dadka naafada ah ee ka tirsan bulshadayada. Waad ku mahadsan tahay Phil saacadihiisa tirada badan ee tabaruca ah!
Linda waxay timid Meals on Wheels afar sano kahor. Waxay leedahay dareen ah inay caawiso dadka waayeelka ah iyo inay hubiso kuwa gaajaysan in la quudiyo. Markii aabbeheed uu ku sugnaa guriga halyeeyada, waxay ogaatay qiimaha booqashada saaxiibtinimo kuwa aan awoodin inay ka baxaan sida ugu badan ee ay jecelyihiin. “Markuu aabahay hurdo seexan lahaa, waxaan ku raaxeysan jiray la sheekaysiga waayeelka kale,” ayay tiri. Waad ku mahadsan tahay Linda waxa aad sameyso oo dhan!
Jack wuxuu ahaa wade iskaa wax u qabso oo joogto ah oo loogu talagalay Cunnooyinka Barnaamijyada Caawinta Degdegga ah ee Bulshada (CEAP) ee laga helo goobta xaafadda Wheels muddo 17 sano ah. Adigoon guuldaraysan, waxaad Jack ka heli doontaa goobta xaafadda CEAP ee ku taal Brooklyn Park Isniinta iyo Jimcaha - iyo maalmo kale haddii loogu yeero darawal beddel deg-deg ah. Tabaruceyaasha joogtada ah sida Jack waxay u hubiyaan dadka cuntada qaata in qof uu iyaga raadinayo. Waan ku salaamaynaa, Jack!
Halkan waxaa lagu sawiray iyadoo lagu qurxinayo bacaha qadada munaasabad tabaruc ah oo ka dhaceysa Lancer Catering (haddaba timaha), Ava wax yar ayey qabataa. Hadday tahay soo gelinta xogta, cunno siinta ayeeyadeed ama u baraya asxaabteeda fasalka ku saabsan Cunnada Lugaha iyada oo loo marayo wargeyskeeda iskuulka, marwalba waa u taagan tahay hawsha! Waxay jeceshahay inay cunto keento isdhexgalka ay la leedahay dadka wax qaata. "Runtii way fiican yihiin waana jeclahay inaan la joogo," ayay tiri. Waad ku mahadsantahay had iyo jeer diyaar u ahaanshaha inaad ka caawiso meesha caawimaad looga baahan yahay, Ava!
Courtney waa joornaalka xogta tabaruce ee degan Metro Meals on Wheels xafiiska. Waxay gacanta ku haysaa dhammaan noocyada isku dubaridka xogta iyo codsiyada falanqaynta ee ka imanaya shaqaalaha leh baakadda iyo xawaaraha iyo saxsanaanta weyn! Ardeyga barashada cilmiga bulshada maalin kasta, Courtney wuxuu jecel yahay inuu ka fogaado buugaagta isagoo u maraya tabaruce. "Xitaa markaan runti, runtii mashquul ahay, waan jeclahay imaanshahayga," ayay tiri. "Waxa la dareemayaa qayb ka mid ah wax ka weyn shaqada guriga."
Sida qof sannado badan wax ku soo qaatay waxbarista, Bob wuxuu had iyo jeer ku riyaaqay inuu ka shaqeeyo bulshada dhexdeeda. Wuxuu u keenaa gaajo tabaruceed farsamo xafiiska Meals on Wheels xafiiska. Maaddaama isaga iyo xaaskiisa ay arkeen waalidkeed oo la halgamaya qaar ka mid ah arrimaha guud ee la socda gabowga, wuxuu sheegay inuu aad u xiiseynayo caawinta waayeelka. “Waalidka xaaskeyga waxay leeyihiin faa iidada dhaqaale ee ay ku heli karaan caawinaad. Qaar badan ma yeelaan, ayuu yiri Bob.
Sue waxay horyaal u ahayd mutadawiciinta cuntada ee Wheels for years. Waxay baratay Cunnada Wheels markii uu saaxiibkeed soo jeediyay inuu cunno u keeno WeCAN Meals on Wheels ee galbeedka Twin Cities sannado ka hor. Waxay si joogto ah u soo saartay wiilkeeda waxayna jeceshahay khibrada. Aad ayey ugu fiicneyd wiilkeyga inuu arko taas. Dadka waayeelka ah waxay jecel yihiin carruurta yaryar, ayay tidhi Sue. Waxay hadda tabaruce ka ahayd xafiiska Metro Meals on Wheels xafiiska asbuuciiba ku dhowaad 5 sano waxaana loo yaqaanaa inay ku kharibaan shaqaalaha alaabada la dubo. "Waalidkey markii ay sii weynaadeen, waxaan arkaa sida ay qiimaha u leedahay in dadku xiriir la yeeshaan bulshada," ayay tiri.
Waad ku mahadsan tahay dhammaan mutadawiciinteenna wax badan ka qabta nafaqada iyo madax-bannaanida deriskeenna waayeelka ah. Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka mid noqoto safkooda, waxbadan ka baro tabarucida cuntada Cunnada.